Sidee Al shabaab ugu suuragashay iney weeraraan xarumo dowladeed oo aad loo ilaaliyo? – Somali Top News
Sidee Al shabaab ugu suuragashay iney weeraraan xarumo dowladeed oo aad loo ilaaliyo?
March 23, 2019 Somali Top News	0 Comments
Maanta kaliya waxaa Muqdisho ka dhacday Afar Qarax kuligood waxey geysteen khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana fuliyay oo soo agaasimay dagaalyahano katirsan ururka Al shabaab.
Isweydii: Sidee magaaladan oo kumanaan ciidan oo kala duwan ka howlgalaan islamarkana ku leh bar-kontralyo farabadan loo soo mooday , sideese lagu qarxiyay xarumo aad loo ilaaliyo oo wasaaradeed? waa su’aal madaxa daalineysa.
Dowladda hadda jirta wuxuu waqtiga ka dhamaanayaa iyadoo aanw waxba ka qaban arrimaha amniga iyo ladagaalanka Al shabaab, xiligii Farmaajo la dooranayay halkii ay Soomaaliya joogtay iyadoo taagan buu xilka ka dagayaa.
Shaki badan ayaa soo baxaya kaa oo ku saabsan sababta dowladda wax uga qaban la’dahay weerarada iyo dilalka ay geestaan Al shabaab.
Waxaa muuqata in amniga qaranka la siyaasadeeyay, maxaa yeelay ciidamadii ku shaqada lahaa ma helaan daryeelkii ay u baahnaayeen kuwa Muqdisho ka howlgala iyo kuwa gobalada jooga isku si ayey uga cabanayaan mushaar la’aam.
Wey iska cadahay in ciidamada dowladda ay laaluush ka qaataan Al shabaab si ay ugu fududeeyaan weerarada ay ka geestaan magaalada Muqdisho.
Dowladdan hadda jirta malahan qorshe cad oo ay kaga adkaan karto Al shabaab, wasiirka amniga Maxamed Islow shaqo kuma lahan howlaha amaanka sidoo kale Fahad Yaasiin oo heesta taliska NISA isna shaqo kuma lahan arrimaha amniga.
Sidee baabuur qaraxyo ku raran yihiin ku gaareen wasaarado aad loo ilaaliyo oo aan agtooda la mari karin!
Shacabka iyo dhalinyarada reer Muqdisho ayaa laga rabaa iney isku tashtaan iskana qabtaan cadowga muuqda iyo kan beenta ah ee shaarka wata.
W/Q: Tafatiraha Somalitopnews
← Weerarkii Muqdisho ka socday oo la soo afjaray iyo Kheyre oo ka hadlay
Al shabaab kills five, including deputy minister in Mogadishu →
Maxkamadda Sare oo ka hadashay dacwadii Hilimo Qaran ee xukuumadda
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo fasax dheer kadib ku soo laabanaya shaqada
Ciidanka dowladda oo kawada dhaq dhaqaayo ciidan deegaano Al shabaab ay kala wareegeen
December 21, 2019 Somali Top News 0